Ballestas ကျွန်းစုအစ္စလက်စ် Ballestas - Pisco
တောင်အမေရိက ပီရူး Pisco
တည်နေရာ: Paracas ၏အမျိုးသားဥယျာဉ်, အီကာဒေသ, Pisco, ပီရူး၏ပြည်နယ်
tour စျေးနှုန်း: $ 15
Duration: 2.5 ဇ
ခုနှစ်တွင် ပီရူး, Ballestas ကျွန်းများ (အစ္စလက်စ Ballestas) - သင်တဦးတည်းအံ့သြဖွယ်ရာအရပျသို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကသဘာဝအရံအနီးတွင်တည်ရှိသည် Paracas ၏ မြို့တောင်ပိုင်းတို့တွင် Pisco ၏ ။ အဆိုပါ Ballestas ကျွန်းများဖို့လှေ၏အကူအညီဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သော်လည်း, သင်သည်အစဉ်မပြတ်လေ့လာရေးလှေမြျှောလငျ့နိုငျဟာအရံများ၏ကမ်းရိုးတန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဤပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဆွဲဆောင်မှုမှာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်။
ပီရူးအတွက် Ballestas ကျွန်းများပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ Galapagos ကျွန်းအလားတူတစ်ခုခု။ သူတို့ကအစအသီးအရွက်များလုံးဝကငျးမဲ့ဖြစ်ကြပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာလုံလုံလောက်လောက်ဆွဲဆောင်မှု, ပုံမှန်မဟုတ်သောအသွင်အပြင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။ အပြင်ပန်း, သူတို့တစ်တွေအဖြူထိပ်ဖျားနဲ့အနီရောင်အောက်ခြေနှင့်အတူအသေးစားကျောက်ဆောင်များကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါ။ 18 ရာစု၌ရှိသောကျွန်းများ guano တစ်အလွှာနှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ ဒီသဘာဝကျောက်ကိုဥယျာဉ်မှူးများအတွက်ရုံဘဏ္ဍာကိုကြီးကြောင့်ငါနီးပါးချီလီနှင့်ပီရူးတို့အကြားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကျောက်တဦးတည်းတွင်သင်သည်တစ်ခုထူးခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် "chandelier" ဟာ Paracas ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယခုတိုငျအောငျ, သိပ္ပံပညာရှင်များသည်သူ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုကျော်စဉ်းစားရခက်ပါပြီ။ အပြင်ပန်းက trident ဆင်တူပေမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများကကြောင့်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးရှားစောင်းပင်သို့မဟုတ်မွောကျပိုငျးလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံရိပ်ကိုကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
Ballestas ကျွန်းများအရပျ၏မန်များထိပ်တန်းအရေးပါမှုနှင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အဘယ်သူမျှမခွင့်ပြုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မည်သူမဆို, သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ငှက်စောင့်ကြည့် မှလွဲ. လမ်းလျှောက်ဖို့ခွင့်မပြုပါဘူး။ ကျွန်း၏အတော်များများကသူမြို့သားမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိ, သူတို့ရဲ့နေရင်းဒေသများအဖြစ်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာအများအပြားသိပ္ပံနည်းကျအဖွဲ့အစည်းများစောငျ့ရှောကျနေကြသည်။ ကျနော်တို့ကအကြောင်းပိုမိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်။
လင်းပိုင် - ဤကျွန်းများဖို့လမ်းပေါ်တွင်သင်ဖြည့်ဆည်းတော်မူလိမ့်မည်တိရစ္ဆာန်ကမ္ဘာ၏ပထမဦးဆုံးကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကယင်း၏လှပသောအသံနှင့်အတူအပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုသင်နှင့်အတူလိုက်ပါလာလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ပင်လယ်ကိုထွက်ချိုးလျှင်, ကံမကောင်းဤအံ့သြဖွယ်တိရိစ္ဆာန်များကိုသင်ဖြည့်ဆည်းမည်မဟုတ်။ ကျွန်းများမှရေကူး, သင်ပြီးသားငှက်တို့ဝေးကွာသောအော်ဟစ်သောစကားကိုနားထောင်နိုင်ပါ။ ကျွန်း၏အဓိကမြို့သားတို့ cormorants, ဝံပိုငှက်, terns, လူတို့သည်အင်ကာ, golubolapye gannets နှင့်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိ Humboldt ပင်ဂွင်းငှက်များဖြစ်လာကြပါပြီ။ ထိုသူတို့အဘို့, ကျွန်း, သုတေသီများငှက်ငြိမ်းချမ်းစွာအသိုက်သောအထူးအဆောက်အဦရှာဖွေတွေ့ရှိ, သူတို့၏အရေအတွက်ကအများကြီးပိုမြန်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။
ပင်လယ်ခြင်္သေ့က၎င်း၏ကြီးမားသောကိုလိုနီအဘို့အကျော်ကြားကျွန်း။ တစ်မှတ်တိုင်သွားရောက်ခြင်း, ဤတိရိစ္ဆာန်များ Balestasas ဖို့အရေးအပါဆုံးဖြစ်ကြပြီးမည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးပုံရသည်။ အဆိုပါအရာကျွန်း၏တဦးတည်းအပေါ်အလွန်သေးငယ်တဲ့ပင်လယ်ခြင်္သေ့သည်အာရှကြယ်ရုံကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့အစနှင့်၎င်းတို့၏မိခင်များန်းကျင်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြ၏ဘယ်မှာသေးငယ်တဲ့ကမ်းခြေရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား, သင်တန်း၏, ခြိမ်းခြောက်မှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ချိုးဖောက်အဘယ်သူမျှမအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရန်လိုသဘောထားကိုပြသထားတယ်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်သတိထားပါဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Ballestas ကျွန်းများမှရရန်, သငျသညျ4နာရီဖြုန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကနေသွားပါစတင်ရန် လီမာ ဆိုအပေါ် Pisco ၏မြို့မှ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ။ အဲဒီမှာသင် Paracas Reserve တစ်ဦးဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်တက္ကစီယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုပင်လျှင်ပန်းခြံအတွင်းရှိသင် Ballestas ကျွန်းများ၏ခရီးစဉ်များအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့အိမ်ငယ်လေးအုပ်ချုပ်ရေး, ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သက်သက်လေ့လာရေးခရီးရရှိနိုင် 2.5 နာရီ, လှေတိုင်းနာရီကြာပါသည်။ ဤအချက်အလက်ဖျော်ဖြေရေး၏ကုန်ကျစရိတ် - 15 ဒေါ်လာ။ စကားမစပ်, သငျသညျအမိန့်နိုင်ပါတယ် လီမာတစ်လှည့်လည် အစားထိုးမလိုအပ်သည့်အခါ။
Toro Toro အမျိုးသားဥယျာဉ်
ရီးရဲလ် Felipe ခံတပ်
အမျိုးသားဥယျာဉ် Nahuel Huapi
Candelaria ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ Basilica
ဂူ Grutas del Palacio
ညစာ zucchini ၏အဘယျကိုဖန်ဆင်းဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
အယ်လ် Fuerte က de Samaipata
အရှေ့တိုင်းစတိုင်အတွင်းပိုင်း - ဒီဇိုင်းကိုအရှေ့တိုင်းဒီဇိုင်းအပေါငျးတို့သပရိယာယ်
ကလေးတစ်ဦးအတွက် Intracranial ဖိအား
Sciatica - အိမ်မှာကုသမှု
စားနပ်ရိက္ခာ PVC ရုပ်ရှင်
အဖြူရောင်ခြေအိတ်ဝတ်ကိုအဘယ်သို့ မှစ. ?